दैलेख : एचआइभीको पीडा भोग्दै ५२ महिला
दैलेख- दुर्गम पश्चिम क्षेत्रमा पर्ने आठबीस नगरपालिका राकमकी धर्मा बडुवाललाई आफ्ना श्रीमान् एचआइभी संक्रमणले बितेको भन्ने कुरा बल्ल थाहा भयो । जब कामका लागि भारत जानुभएका श्रीमान्लाई एचआइभी संक्रमणले सताएपछि उपचारकै क्रममा उनको मृत्यु भयो ।
श्रीमानकै कारण आफू पनि एचआइभी संक्रमणमा परेर समस्यामा परेकी उनलाई छोराछोरीको लालनपालनमा समस्या छ । जेठी छोरीको बिहे भए पनि आफूसँग रहेको छोराको लालनपालनमा समस्या भएकाले बाख्रापालनजस्ता सजिलो व्यवसायमा स्थानीय सरकारले सहयोग गरे जीवन गुजारा गर्न सजिलो हुने उनी बताउछिन् ।
बडुवाल मात्रै हैन एचआइभी संक्रमण भएर श्रीमान् गुमाएका करिब ५२ महिला राकममा छन् । अधिकारप्राप्ति र समाजमा गरिने भेदभाव विरुद्ध लड्न आफूहरू संगठित हुनुपरेको उनीहरूको भनाइ छ । संगठित भएर आवाज अठाउन थालेपछि अहिले एआरटी औषधि राकम कर्णाली स्वास्थ्य केन्द्रबाटै उपलब्ध भएकाले उनीहरूलाई धेरै सजिलो भएको छ ।
औषधि सेवन गर्नकै लागि सुर्खेत र दैलेख सदरमुकाम धाउनुपर्ने विगतको समस्या अहिले समाधान भएको छ । औषधिसँगै संक्रमित महिलालाई पोषिलो आहार, स्थानीयस्तरमै रोजगारी र व्यवसाय प्रर्वद्धनलगायतमा स्थानीय सरकारले चासो बढाएको आठबीस नगरपालिकाका प्रमुख खड्कराज उपाध्याय जोड दिन्छन्। नगरपालिकाले पोषणमा सहयोग पुगोस् भनेर मासिक रु ५०० का दरले संक्रमितलाई भत्ता उपलब्ध गराउँदै आएको छ ।
संक्रमित भनेर समाजमा हेला हुन थालेपछि आफूहरू संगठित भएको तुलसा माझी बताउछिन् । ती सबै महिलाका श्रीमान् भारतमै रोजगारीका लागि गएका र एचआइभी संक्रमणले मृत्यु भएको माझीको भनाइ छ ।
जिल्लाको अधिकांश स्थानका बासिन्दा रोजगारीका लागि भारत जानुपर्ने बाध्यता पुरानै हो । अहिले स्थानीय सरकारललाई गाउँमै रोजगारी र एचआइभी संक्रमितलगायत थुप्रै समस्यामा परेका नागरिकको जीवनरक्षाबारे पनि चासो बढाउनुपर्ने दायित्व बढेको छ । रासस
१. यी हितकारी चिकित्सक भए 'सिएनएन हिरो अफ द इयर'
२. करिब ३ सय अधिकृतको विज्ञापन खोल्दै लोक सेवा, स्वास्थ्य सेवाका लागि पछि खोलिने
३. डा अधिकारीको अध्यक्षतामा खोप सल्लाहकार समिति गठन
४. आर्थिक समस्यामा परेका एमबिबिएस अध्ययनरत ३ विद्यार्थीलाई सहयोग
५. छैन जानकारी, पहिलो महिनावारी
६. स्वास्थ्यका कर्मचारी सरुवा रोकियो : कर्मचारी समायोजन नभएसम्म सरुवा नगर्ने सरकारको निर्णय
७. प्रधानमन्त्री ओली नियमित उपचारका लागि अस्पतालमा, इसिजी गरेर फर्किए
८. विरोधका कारण रोकिएको न्याम्सका पदाधिकारी नियुक्ति भागबण्डामा मिलाइँदै
१०. दाङ : आँखा अस्पताललाई ५० लाख
३. पाँच अस्पताललाई ‘प्रदेश रिफरल सेन्टर’ बनाउने स्वास्थ्यको प्रस्तावमा मन्त्रिपरिषद्को सैद्धान्तिक सहमति
४. क्वाकको कर्तुतः दाँतको उपचारमा लापरबाही गर्दा बिरामीलाई भयो क्यान्सर
५. स्वास्थ्य सचिवका रुपमा अधिकारीले पत्र बुझे, चिकित्सक संघ विरोधमा उत्रँदै
७. स्वास्थ्य चौकीको प्रमुख हुन पाउनु पर्ने भन्दै एचए पुगे प्रशासन कार्यालय
८. स्वास्थ्यका कर्मचारी सरुवा रोकियो : कर्मचारी समायोजन नभएसम्म सरुवा नगर्ने सरकारको निर्णय
९. लाइसेन्सिङ परीक्षामा ५६ प्रतिशत डाक्टरी विद्यार्थी फेल
१०. छि! चिकित्साका विद्यार्थी बस्ने होस्टलको हालत: खानेपानीको ट्याँकीमा लेउ, लेदो र गड्यौला